Rano AICAR (2627-69-2) mpanamboatra - Phcoker Chemical
Vola simika AICAR (2627-69-2)
Ny vovon-tany AICAR, fantatra amin'ny anarana hoe ribosida AICA, dia mpitsabo madio amin'ny antineoplastic activity ary mpikatroka marefo ny AMP-hetsika .......
Rano AICAR vovoka (2627-69-2) video
Rano AICAR roahina (2627-69-2) Famaritana
Ny roja AICAR izay fantatra amin'ny anarana hoe ZMP dia endriky ny AMP izay afaka manandratra ny proteinina AMP-miankina amin'ny AMP (AMPK). Ny vovon-tsolika AICAR dia ivon-toeran'ny inosine monophosphate. Ny voankazo AICAR roahina dia ampiasaina amin'ny fitsaboana sy fiarovana amin'ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fiterahana, ka afaka miditra ao amin'ny efitranon'ny sela mba hampihenana ny adenosine kinase sy ny adenosine deaminase. Izany dia mampitombo ny tahan'ny nokleasidan'ny fanasitranana izay mampitombo ny taranaka adenosine avy amin'ny adenosine monophosphate raha tsy ao anatin'ny toe-pahasalaman'ny mychards. Ny voamaina AICAR dia mampitombo ny fiterahana glucose amin'ny famindrana ny fandikana ny GLUT4 sy / na amin'ny fampivoarana ny lalana p38 MAPK. Ny zava-mahadomelina koa dia hita fa mety ho fitsaboana ho an'ny diabeta amin'ny alalan'ny fampitomboana ny fiasan'ny metabolika amin'ny tavy amin'ny fanovana ny fitambaram-panafody.
Rano AICAR roahina (2627-69-2) Specifications
Product Name Rano AICAR roapolo
Anarana simika Ny 1-ribosyl-4-carboxamido-5-aminoimidazole, ARA 100, ARA-100, ARA100, GP 1 110, 5-aminoimidazol-4-carboxamide 1-ribofuranoside, 5-aminoimidazol-4-carboxamide riboside, acadesine, AICA ribofuranoside, AICA riboside, aminoimidazole carboxamide ribonucleoside, arasine, Z-riboside
molekiolan'ny Formula C9H14N4O5
molekiolan'ny Wvalo 258.23
mitsonika Point 214-215 ° C
Ny antsasaky ny biolojia Tena fohy
Color toy izany
Rano AICAR roapolo Application AMPK mpikatroka
Ny voankazo AICAR izay fantatra amin'ny hoe ZMP dia endriky ny AMP, dia cellulose-permeable, activite allosterique de AMP-activated kinase kinase (AMPK). Izy io dia afaka manandratra ny karazan'antoka proteinina AMP (AMPK), mampitombo ny fihanaky ny tsimokaretina, ny fahasamihafana sy ny tsy fahampian'ny sela mikraoba matevina, ary manimba ny tsindrokarin'ny cytokines pro-inflammatoire sy ny iNOS amin'ny astrocytes.
Ny vovon-tsolika AICAR dia ivon-toeran'ny inosine monophosphate. Ny voankazo AICAR roahina dia ampiasaina amin'ny fitsaboana sy fiarovana amin'ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fiterahana, ka afaka miditra ao amin'ny efitranon'ny sela mba hampihenana ny adenosine kinase sy ny adenosine deaminase. Izany dia mampitombo ny tahan'ny nokleasidan'ny fanasitranana izay mampitombo ny taranaka adenosine avy amin'ny adenosine monophosphate raha tsy ao anatin'ny toe-pahasalaman'ny mychards. Ny voamaina AICAR dia mampitombo ny fiterahana glucose amin'ny famindrana ny fandikana ny GLUT4 sy / na amin'ny fampivoarana ny lalana p38 MAPK. Ny zava-mahadomelina koa dia hita fa mety ho fitsaboana ho an'ny diabeta amin'ny alalan'ny fampitomboana ny fiasan'ny metabolika amin'ny tavy amin'ny fanovana ny fitambaram-panafody.
Ny AICAR dia mialoha ny fitrandrahana antineoplastique. Zava-dehibe amin'ny fikarakarana aretina amin'ny metabolika toy ny karazana 2 karazana sy ny fitsaboana ny karazana kanseran'ny karazany.
Ny kitay AICAR (2627-69-2) Mechanism of Action
Ny endriky ny nucleoside an'ny AICAR, acadesine, dia analoga adenosine izay miditra ao amin'ny cellules izay manakana ny adenosine kinase sy adenosine deaminase. Izany dia mampitombo ny tahan'ny nokleasidan'ny fanasitranana izay mampitombo ny taranaka adenosine avy amin'ny adenosine monophosphate raha tsy ao anatin'ny toe-pahasalaman'ny mychards. Ao amin'ny miozety hoditra, ny acadesine dia aforitra amin'ny AICAR mba hivoahana ny AMPK raha tsy manova ny haavon'ny nucleotides. Ny AICAR dia afaka miditra ao amin'ny lalan'ny synthesis de novo ho an'ny adenosine synthesis mba hanemorana ny adenosine deaminase mahatonga ny fihenan'ny ATP sy ny haavony adenosine.
Fampiharana ny poety AICAR (2627-69-2)
▪ Mampihena ny zava-mahadomelina
▪ Mandrosoana ny glucose
▪ Mpikatroka AMPK
▪ Mitombo ny lexemia lymphoblastika
soso-kevitra AICAR vovoka (2627-69-2) Dosage
Ny dosages ho an'ny AICAR dia mety amin'ny 150 mg isanandro, raha toa ianao ka mametaka azy amin'ny GW, manodidina ny 500 mg isan'andro amin'ny fampiasanao azy manokana. Ny tavoahangy rehetra dia matetika tonga amin'ny dosage 50 mg, noho izany dia azo antoka fa lafo izany. Noho izany antony izany dia manan-danja ny fampiasana izany mandritra ny efatra herinandro farany alohan'ny andron'ny fifaninanana.
soa azo avy amin'ny Poitra AICAR (2627-69-2)
♦ Ny AICAR dia mialoha ny fisotro madio miaraka amin'ny asa antineoplastique. Zava-dehibe amin'ny fikarakarana aretina amin'ny metabolika toy ny karazana 2 karazana sy ny fitsaboana ny karazana kanseran'ny karazany.
• Fampiharana ny AICAR amin'ny fitsaboana ny aretin'ny metabolika.
♦ Ny AICAR dia manana fahasamihafana ara-pahasalamana amin'ny fitsaboana ny aretina amin'ny neurotematika izay ahitana taratra etiolojika ny microglia.
• AICAR dia manampy amin'ny fanatsarana ny môtera, ny fahatsiarovan-tena sy ny fiasan'ny atidoha
• Ny AICAR no tena ampiasaina ho fampidirana amina fiaretana maharitra. Ireo atleta koa dia mampiasa izany ho fampiroboroboana ny fanatanjahantena amin'ny fanatanjahan-tena izay ilana fiaretana.
• Ny AICAR dia analoga nucleoside izay afaka miditra ny dobo nukleoside ary afaka mampitombo avo lenta ny adenosine mandritra ny vanim-potoanan'ny ATP. Ny adenosine-regulating agents (ARAs) dia nekena ho an'ny mety ho fitsaboana ho an'ny asamia any an-toerana.
Ny AICAR dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny lexemia amin'ny lymphoblastika ary voalaza fa manana fihenanam-panafody.